फेरि आज पनि बढ्यो यति धेरै कोरोना संक्रमित, पुरै तथ्याङ्क हेर्नुहाेला! – PathivaraOnline
Home > समाचार > फेरि आज पनि बढ्यो यति धेरै कोरोना संक्रमित, पुरै तथ्याङ्क हेर्नुहाेला!
फेरि आज पनि बढ्यो यति धेरै कोरोना संक्रमित, पुरै तथ्याङ्क हेर्नुहाेला!
admin June 10, 2020 समाचार, स्वास्थ्य 0
काठमाडौं, २८ जेठ ।
मुलुकमा थप २ सय ७९ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा २ सय जना ७९ संक्रमित थपिएका हुन् । थपिनेमा २ सय ५७ पुरुष र २२ महिला छन् ।
योसंगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या ४ हजार ३ सय ६४ पुगेको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म पिसिआर परिक्षण ११०७४४ जनाकाे गरिसकिएकाे छ भने आरडिटी टेस्ट १७२८८० जनाकाे गरिएकाे छ ।
टेस्टमा संक्रमण नदेखिनेकाे सँख्या १०६३८० रहेकाे छ भने संक्रमण देखिएकाे सँख्या ४३६४ पुगेकाे छ । हालसम्म नेपालकाे क्वारेन्टाइनमा १७२२६६ जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा हालसम्म् ३६७५ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमित ठीक भएर जानेहरू सँख्या पनि तुलनात्मक रूपमा बढिरहेकाे छ । हालसम्म् नेपाल अधिराज्यभरबाट कोरोना संक्रमित निकाे भएर जानेकाे सँख्या ६७४ पुगेकाे छ भने कोरोनाकै कारण मृत्य हुनेकाे सँख्या १५ पुगेकाे छ ।
ललितपुरमा हातखुट्टा बाँधेर खुँडाले टाउको छि’नाएर शाहीको ह’त्या! परिवारमा यस्तो रुवाबासी (भिडियो सहित )
संविधान संशोधन नया नक्सा विधेयक खारेजीको माग गर्दै सरिता गिरीको संशोधन दर्ता
श्रीमान हराएपछिः म त चित्त बुझाउँला तर छोरीले बाइक देख्नै हुदैन बाबा खै भनेर सोध्छिन्? के उत्तर दिनु मैले? (भिडियो हेर्नुस्)
ऋषि कपूरको अन्त्येष्टिमा २० जना सहभागी, लकडाउनका कारण छोरी जान नपाएपछि यस्तो बिजोग!
छोरीको अनुहार सँधै क्यामेराबाट लुकाउँथे अक्षयकुमार, ट्वीङ्कल खन्नाले सार्वजनिक गरिदिइन् छोरीको यस्तो भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)